China fire stop module fekitori uye vagadziri | Weicheng
Chigadzirwa Chigadzirwa Moto kuramba module
Yakananga modhi 240 * 120 * 60mm
Chigadzirwa Kushandisa Iyo inoshandiswa pakuisa-chiratidzo-chisimbiso kwetambo netambo mune tambo tangi, tambo tambo, tambo shafiti, tambo shafiti, uye tambo yekupinda maburi mune simbi, simba remagetsi, kutaurirana, maindasitiri uye ehurumende kuvaka maindasitiri.
ChigadzirwaAdvantages Yakareba moto kuramba nguva, kuvakwa kwakanaka, yakanaka moto kuramba uye mvura kuramba
1.Rong moto yekudzivirira nguva: zvinoenderana neyekudzivirira moto kuvaka zvivakwa kutarisa uye kuongorora nzvimbo, nguva yekudzivirira moto inopfuura maminetsi zana nemakumi masere, uye chaiyo nguva yekudzivirira moto inopfuura maminetsi mazana maviri nemakumi masere maererano neyakaedzwa nerabhoritari yebhizinesi.
2.Long izwi rechokwadi: nekuda kwekushandisa kwezvisingawanzo zviwedzerwe zvinhu uye hushoma hwepamusoro-hunyanzvi hwekubatanidza zvinhu, iyo yekumhanyisa kukwegura bvunzo inoratidza kuti nguva yechokwadi inogona kusvika anopfuura makore gumi nemashanu, uye bhegi remoto-rinodzosera kazhinji inoshanda kwemakore matatu.
3.Good mvura kuramba: bvunzo inoratidza kuti mushure mekunyura mumvura kwegore rimwe, chigadzirwa hachina kuzvimba, kushanduka uye kudonha, saka chakakodzera kushandiswa mugero remvura nemvura.
4.High zvemaziso simba: kwakavharwa nenyama. Nekuda kwekushandiswa kwezvinhu zvisina kujairika zvekubatanidza uye kuumba, iyo yakayerwa simba rekumanikidza i0.8MPa, inova ka16 yeiyo yepakeji inodzora moto (0.05Mpa). Iyo ine diki diki yezvisungo zvepamusoro zvekubatanidza, inova yakasununguka uye inobatsira kuchengetedza tambo uye inotevera kupaza uye kugadzirisa. Ichi chinhu chakakosha cheichi chigadzirwa chakasiyana neyechinyakare inorganic plugging zvinhu.
5.Convenient kuvaka: nekuda kwekushandisa kweiyo shoma yezvisungo zvekubatanidza uye yakasarudzika concave convex yekuzvivharira yega chimiro, iyo yekuisa chisimbiso rusvingo ine yakakwira michina simba uye haisi nyore kudonha Inonyanya kukodzera kubaya maburi makuru senge akajairwa tambo tangi. Nekuda kwepurasitiki yayo yakanaka, zviri nyore kucheka uye kubaya maburi zvinoenderana nemamiriro emaburi netambo, inova yakaoma uye yakavimbika kupfuura moto unodzora package package.
6.Light uremu: iyo yakayerwa yakaoma kuomarara ndeye 0.5t / m3, iyo yenyika muyero inoda hapana inopfuura 2.0t / m, uye huremu hwacho husingasviki chetatu cheyakajairwa nyika, iyo inogona kudzikisa zvakanyanya mutoro wekutakura zvinhu pa waya tireyi uye zvivakwa.
7.Green kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: kushandisa inorganic kuwedzera moto unodzora zvinhu, mushure mekupisa kwekuwedzera, isina-chepfu, hapana hwema.
8.Anti gonzo kuruma: chakakosha uye chisiri kusvibisa chinhu chinowedzerwa kune zvigadzirwa zvigadzirwa kudzivirira mhuka diki nemakonzo kubva pakuruma.
Inonyanya kushandiswa mukuvhara moto kusina tambo, tambo nemidziyo yemagetsi muminda yesimbi, simba remagetsi, kutaurirana, petrochemical, maindasitiri uye kuvaka kwevanhu, nezvimwe.
Pashure: Moto unodzora bhegi
Zvadaro: Mucheka unodzora moto